Sales & Marketing Supervisor | Job in Myanmar ﻿
12.2.2019, Full time , Fashion
Company: Asia-Pacific Apparel Corporation Co.,Ltd.
retail and wholesaleWorking day
•	Monday to Saturday
•	9:00 am to 5:00 pm
•	တာဝန်ယူလိုစိတ်ရှိပြီး အသင်းအဖွဲ့ကိုကောင်းစွာဦးဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	စကားပြောချိုသာပြီး၊ Customer များနှင့် ကောင်းမွန်စွာ ဆက်ဆံပြောဆိုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	သွက်လက်ပြိး ရိုးသားကြိုးစား၍ အသင်းအဖွဲ့နှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ကျွမ်းကျင်စွာသွားလာနိုင်ရန်၊
•	နယ်ခရီးသွားနိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
•	ဘွဲ့ရ၊ သက်ဆိုင်ရာ Certificate ရှိထားသူဖြစ်ရမည်။
•	Computer Excel ကျွမ်းကျင်ရမည်။
•	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (2)နှစ် နှင့် အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
Work location အမှတ် ၂၀၊ စံပယ်လမ်းသွယ် (၇)၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်။ (ယုဇနပလာဇာမှတ်တိုင်)
Company Industry: Sales & Marketing Supervisor
Job posted: 12/2/2019
Asia-Pacific Apparel Corporation Co.,Ltd.
280 Days, Full time , Fashion
•	Can work under pressure. •	ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ကျွမ်းကျင်စွာသွားလာနိုင်ရန်၊ •	နယ်ခရီးသွားနိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
Working day •	Monday to Saturday Working Hour •	9:00 am to 5:00 pm Rest day Sunday and Public holiday
•	စကားပြောချိုသာပြီး၊ Customer များနှင့် ကောင်းမွန်စွာ ဆက်ဆံပြောဆိုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	သွက်လက်ပြိး ရိုးသားကြိုးစား၍ အသင်းအဖွဲ့နှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ကျွမ်းကျင်စွာသွားလ� ...
•	တာဝန်ယူလိုစိတ်ရှိပြီး အသင်းအဖွဲ့ကိုကောင်းစွာဦးဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	စကားပြောချိုသာပြီး၊ Customer များနှင့် ကောင်းမွန်စွာ ဆက်ဆံပြောဆိုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	သွက်လက်ပြိး ရိုးသားကြိုးစား၍ အသင်းအဖွဲ့ ...
•	Can able to handle and responsible for all sale and marketing operations and other related tasks •	ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ကျွမ်းကျင်စွာသွားလာနိုင်ရန်၊ •	နယ်ခရီးသွားနိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
Sales & Marketing Supervisor Sales & Marketing Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Asia-Pacific Apparel Corporation Co.,Ltd. Sales & Marketing Jobs Sales & Marketing Jobs Sales & Marketing Supervisor Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Work in Yangon (Rangoon)(7991)
Work in Yangon Region(1626)
Work in Tanintharyi Region(116)
Myanmar Golden Top Co.,Ltd
Best Guiding Star Company Limited
Dirty Works Cosmetic
Beauty Treasures Ltd
Export Marketing Officer (Rice Mill & Parboiled)
Energy and Fuel Reconciliation Supervisor